AAA Andranomanelatra : Mampijaly omby sy vahoaka ny fitondrana | Ny Valosoa Vaovao
AAA Andranomanelatra : Mampijaly omby sy vahoaka ny fitondrana
par gvalosoa | Mar 8, 2018 | Edito | 1 commentaire
Mampijaly omby sy mampijaly vahoaka ny fitondrana, izay no azo amehezana ny zava-misy any Andranomanelatra Antsirabe amin’izao fotoana. Noho ny fanagiazana sy fanaovana fairano ny orinasa AAA Andranomanelatra Antsirabe, ataon’ny fitondram-panjakana, misy amin’izao fotoana izao ny ombivavy be ronono Holstein maty ao amin’ity orinasa ity, noho ny tsy fahampian’ny sakafo ho an’ireo omby ompiana ao amin’ny toeram-piompiana na Farm an’ity orinasa ity. Omby iray no maty, ary saika ny 50% ny omby ompiana ao amin’ny Farm an’ity orinasa ity dia an-dalam-pahafatesana ihany koa amin’izao fotoana izao. Ny antony dia tsy azon’ny fiarakodia sy ny traktera idirana ny toeram-piompiana an’izany orinasa izany. Omby miisa 168 amin’izao fotoana no ompiana ao, ny 68 amin’ireo dia ombivavy be ronono Holstein avokoa fa ny 100 dia omby gasy. Ho an’ny toeram-piompiana indostrialy toy ny an’ny AAA ao Andranomanelatra ity anefa, tsy maintsy mila kamiao sy traktera ny orinasa ikarakarana ireo biby fiompy ireo: itaterana ny vilona hohaniny, itaterana ny provandy ilain’izy ireo, itaterana ny rano hosotroiny, sy itaterana ny solika gazoala hampiasaina hampiakarana rano ampiasaina sy hampandehanana ny fitaovana elektrika iterena ronono ihany koa. Nidina tany an-toerana ny tlata teo ny mpisolovava ny orinasa AAA, Me Ratefimahefamijoro Dimin’Eloi nijery izay fahavoazana mihatra amin’ity orinasa ity izay, natrehan’ny vaditany, nangataka tamin’ireo mpitandro filaminana miandry ny vavahady mba hahafahan’ny fiarakodia sy trakitera miditra hahafahana mampisakafo araka ny tokony ho izy ireo biby fiompy ombivavy be ronono ireo, izay marefo tokoa amin’izao fotoana. Araka ny baiko azon’ireo mpitandro filaminana anefa, tsy azo idiran’ny fiarakodia mihitsy ny faritry ny orinasa sy ny toeram-piompiana hatreto. Nanambara noho izany ny mpisolovava ity orinasa ity fa tsy tokony hatao takalon’aina noho ny fampiatoana vonjy maika ny asa fanodinana ataon’ny orinasa AAA ireo biby fiompy, nanamafy izy ny hanokafana maika ireo vavahady miditra amin’izany toeram-piompiana izany. Marihina fa rahampitso zoma maraina, hisy ny fitsarana ady maika momba ny fanagiazana ity orinasa ity any amin’ny Fitsarana any Antsirabe. Momba ity raharaha ity ihany, nohamafisina amin’ny « soudure » ny fanagiazana ny orinasa AAA Andranomanelatra. Tonga tao Andranomanelatra ny ira-panjakana omaly maraina, nanamafy amin’ny soudure ny scellage hanamafisana ny tsy fahafahan’iza na iza mitsofoka ny faritry ny orinasa. Mitohy hatrany arak’izany ny fanaovan’ny fitondrana antsojay ny orinasa ana Malagasy.
Brian GATTI	le 10 mars 2018 à 10 h 07 min
Toe-javatra mampalahelo tokoa ny fanakatonana orinasa. Mijaly very asa ny mpiasa ; ny biby matin’ny hanoanana. Raha jerena @ fomba tsy miangatra, olona no enjehina. Andao ataontsika hoe (supposons que…) nahavita tsy mety teto @ firenena Ravalomanana. Fa izy irery ve no nahavita hadisoana ? Ankehitriny, rakotra kolikoly i M/kara ary toa misy mpiaro izy ireny. Ny manahirana @ izao dia ny mitady ny seha-panjakana tsy misy aferafera. Moa ve azo ataon’ny vahoaka romotra ny mirohotra manafika ny lapam-panjakana ? Iza no nitarika an’izany ? Iza no saika hovonoin’ireo olona ireo tao ? Iny tetezamita 5 taona iny dia nampikorosy fahana ny Malagasy. Izao no Repoblikan’ny Fitiavana ! Mahafinaritra azy ireo ny mahita ny vahoaka sahirana ao anatin’ny fahantrana lalina. Nefa ny naongana olona mba nahitan’ny mpianatra kely, mahantra, an’ny écoles publiques sy privées, manerana ny Nosy kits scolaires sy droit d’entrée… Mba nanongana nefa tsy nahavita ny vitan’ilay naongana akory ! Tokony ho fantatry ny SADC, ny UA, ny UE, ny C/té Internationale, sns, @ alalan’ireo Ambassades ny zava-misy eto fa mijaly loatra ny vahoaka.